Mai Chibwe VekwaZimuto: Kusiyana kwekurhojana kwevakaroorana nevasina
Ndoda kumbotaura nenyaya yokusiyana kwekurhojana kwevakaroorana nekwevasina kuroorana. Tigotarisazve kuti zviri nani kuroorana here kana kuti kwete kana tichingova panyaya yekunakigwa nokurhojana chete chete , tisinei nedzimwe nyaya dzakaita sokurera mhuri kana kuvaka musha, zvinozikamwa kuti kuroorana kuri nani. Saka nyaya iri pano ndeiyi:
Kuvata nomurume/mukadzi wako
Kuvata nechikomba kana hure
Kuvata nomukomana/musikana wako
Zvakasiyaneyi panyaya yokurhojana chete chete? Ndiyo nyaya iri pano.
Kana ukatanga kudanana noumwe munhu zvorudo chazvo, unoti ukamufunga wotohwa mudumbu chaiko, uye hana inovhunduswa nazvo. Unovata fungwa dziri pamunhu iyeye uye kurota unorota unaye upenyu huchiratidza kuva hwakanaka chose. Ukapepuka fungwa dzotodzokera pamunhu uya wobva washaya hope. Kana ukada kufambafama uri wega unongofunga munhu iyeye chete chete.
Foni yako ukatanga kuishandisa kutaura naye nyaya dzacho hadziperi uye hapana chadzinoreva. Kungohwa hwi rake chete zvinokufadza moyo. Unohwa kufara norudo gwako nomunhu uyu. Zvese zvaanotaura chero dziri nhema unongofunga kuti ichokwadi. Pese pese paunoona akakunyorera kuti LOVE unohwa kufara chose chero pari pa WhatsApp, TEXT, Email, chero papi zvapo. Kungofunga kuti anondida zvinofadza.
Kozoti kwapera kana mwedzi miviri muchidanana mukomana anobva atanga kukuudza nezviri mufungwa make kuti anokuona sei uye zvinomuitisei mumuvuri wake. Ipapo anenge achipota achizvirotera ari kuhope nokukufunga. Iwewo unorotawo uchivata naye kana noumwe murume asina kumeso asi uchiziva kuti ndiye.
Panguva iyi fungwa haishandi zvakanaka zvokuti chero vakuru vakakupa mazano akanaka ezverudo hapana chaunombohwa pane zvavanotaura. Unogaroita zemo uri wega uku unokwanisazve kumbozvibatabata uchifunga uyu munhu uchitomuona mufungwa achavata newe. Ukasangana naye kumagirosa unohwa kufara moyo zvisingaiti.
Mukomana anokubata kana ruoko unohwa zemo richitanga mumuviri. Akakubhabhadzira magaro kana kukumundikira unohwa muviri wese uchida kuti awedzere. Muviri unoti nditore uite zvaunoda neni asi fungwa inoti iva nounhu usamurega achiita zvaanoda.
Asi pauviri hwenyu munoita EXCITEMENT iri pamusoro yokuti hamuhwisisi kuti moitei nayo. Muupenyu hwako uchazoda kuva ne EXCITEMENT iyi asi uchiishaya zvinova zvinokuitisa kuti uite zvinhu zvausinadi muupenyu hwako.
Totanga nomukomana nomusikana ava. Kana pakaitika kuti vanovatana zvisiri pamutemo. Pakugadzirira kuvatana kwavo zvinowanzoitika kwe maminitsi mashomanana zvokuti fungwa inokurigwa nezemo vanhu vongoerekana vatoisana vapanana urume ipapo kondhomu hapana, zvigwere hazvina anoziva kuti zviripo here kana kwete. Uya ange ari mhadhara atobviswa humhandara. Jaya riyawo ava murume. Excitement iya yapera fungwa dzadzoka munhu ozvibvunza kuti ndingabata mimba here kana kuti kwete. Ndingabata chigwere hare kana kwete. Ndabuda ropa here kana kuti kwete. Kana abuda ropa kazvinji anoda kuti mukomana azvione kuti pabuda ropa.
Pakuzovatana kunotevera EXCITEMENT yacho haifanani asi kana zviri zvokubira inene iripo. Ukaonana newmukomana unoita EXCITEMENT pamwe inotokutyisa iwe. Asi mukazobatwa kuti muri kuvata mese nevakuru. Unoshungurudzwa nezviito zvako. Pakaita mimba unotombogwara nokufunganya. Kana Makati ngwarei mukanotenga makondhomu munoita henyu asi munohwa kunaka chose chose zvokuti mese munofarira kugaroita. Munoronga kwekusangana muchotoziva kuti mukasangana pasina anokunetsai muchatovatana chete. Mese munozvifarira.
Koitawo vanovatana pachihure vachiziva kuti ichi chihure hacho. Vanoitawo EXCITEMENT asi ishomanana chinowanda izemo rokungoda kuvata noumwe munhu. Varume apa vanowanda zemo kupfuura vakadzi iri ngari yokuti mukadzi ane AGENDA yakasiyana neyomurume uyu. Murume ari kungoda kubvisa zemo mukadzi ari kuda chimwe chinhu chaari kutenga nokuvhura makumbo. Pakadai varume ndivo vanoita EXCITEMENT kwenguva dikidiki. Panguva iyoyi mukadzi akamuti bvisa mari anobvisa okwira hure. Pamwe hure rinodawo kurhojewa pamwe haridi, hakuna unoziva. Kana rapiwa mari rinobvisa bhurugwa murume oripa urume. Nyaya yapera. Kungohi vhura chitubu ndiise urume ndigokupa mari. Hapana rudo hapana chimwe chingahi chiripo.
Kuno ku EUROPE kune vakadzivo vanonotsvaka mahurerume vekuvarhojera mari. Mukadzi wechikuru anonotsvaka murume wechidiki ane simba pakurhoja omupa mari vorhojana. Murume ari pabasa mukadzi ari pakunakigwa. EXCITEMENT yavo haina kufanana.
Kune varume vaya vasingagoni kunyenga vakadzi vanoti kana akavata ne hure kaviri katatu otoona sokuti ane rudo nehure racho. Ndiye anoita EXCITEMENT pakadai asi mukadi uya haanei naye. tinohwa vakawanda vanoda kutoroora hure raanoziva kuti iri ihure. Iri ngari yokusagona kunyenga uye kushaya CONFIDENCE.
Zvichikomba nomukadzi wemunhu.
Kunokwanisika kuita chikonzero chokuti mukadzi wemunhu anohura nechikomba pasina zvekupanana mari kana chimwe chinhu asi zviri zvokungodawo kuwana wekuvata naye panguva iyoyo. Zvinoitika kune vakawanda chose. Kana mukadzi wemunhu ane nyaya dzaanoshushikana nadzo mumba anokwanisa kundodziturira kushamwari rume. Kana shamwarirume iya ikaterera ikaratidza kuhwisisa vaviri ava vanokwanisa kuvaraidzana nokurhojana. Kana murume uye ane mukadziwo vanokwanisa kutodanana zvechivande asi uku vane mhuri dzavo. Vanhu ava chivande ichi chinovaitisa EXCITEMENT yakawanda kupfuura zvokumba. Zvakafanana nembavha Mbavha inoita EXCITEMENT pakuba nokutadza kubatwa zvokuti inodazve kuba.
Murume uyu anoziva kuti mukadzi waanaye akavata nomurume wake madeko uye azere urume izvozvi asi anomurhoja zvakadaro agonakigwa kupfuura manakire emukadzi wake iri EXCITEMENT yokuba iyoyo. Mukadziwo anonakigwa nokutorera umwe mukadzi murume, kuba ikoko. Zvinomuitisa EXCITEMENT yakawanda kupfuura yokumba kusina wemakwikwi naye.
Vanoudzana rudo vachipanana zvinhu vachitumirana maTEXT anofadza chose asi chokwadi ndechokuti vakabatwa hapana pakati pavo anoda kusiya mhuri yake achitevera umwe saka rudo chaigo huri kumba apa inongori EXCITEMENT yokunakigwa nokuba.
Zvinokwanisika kuti vakahura kwenguva refu EXCITEMENT IYI inopera voregera. Vanhu vakawanda vanohura vane varume/vakadzi vanoita nguva shoma vorega.
Vanhu ava vakangotanga kudanana zvemoyo, panoita nguva yavanowedzera kurhojana zvokuti zuva nezuva, asi nguva iyoyi ndiyo ichaitisa kuti mafambire avo afanane neekumba zvovabhowa vobva vasiyana.
Zvinonzi vakawanda vansangana kumabasa. Zvoitika kuti vanhu vane mhuri vanohura vanodai:
Tichitarisa nyika ye USA nechihure chevane mhuri
Vari mumuchato vanohura
Vasingahuri asi vachida kuhura dai vasingazobatwi
Vanorambana umwe ahura
Vasingarambani asi vachizikwanisa kufarazve
Pane vanohura, vanohura nevanoshanda navo
Kuhura uchibva mumba kunoita nguva yakadii nomunhu umwe chete.
Chinhu chikuru chinoita munhu achirega kuhura nomunhu iyeye kubatwa kana kuzikamwa kuti uri kuhura naye zvoreva kuti EXCITEMENT hapachina.
10% one day
40% 5wks-12 months
20 % 12 months – 2 years
30% long time
Saka apa tinoona kuti tese vakadzi nevarume panyaya dzokurhojana tinoda zvine EXCITEMENT pazviri zvokuti munhu anokwanisa kusiya mhuri yake achindohura noumwe munhu anosiyawo mhuri yake. Asi chikonzero chekuhura kwevakadzi chakasiyana nechevarume.
Kurhojana kwevanobika mapoto:
Kubika mapoto kugarisana mukadzi nomurume musina kuroorana zviri pamutemo. Kana makatanga muri mukomana nomusikana mukadanana zvinozikamwa musati matanga kugara mese, muchaona kuti magarire enyu haana kusiyana nevakarorana. Tichatarisa vakaroorana kuti vanozvifambisa sei. Chakangosiyana ndechokuti imi hamuna tsamba yomuchato. Ukaterera vemapoto vachitaura unorohwa achiti uyu murume/mukadzi wangu sezvinongoitawo vakaroorana.
Kana mukatanga kunyengana zviri pamutemo mukazoroorana uchaona kuti panoita nguva ine EXCITEMENT yekurhojana pamunotanga kurhojana musati maroorana. Zvoramba zvakadaro, mojairana moderedza kurhojana kwenyu.
Mozotizve maroorana mowedzera futi muchiitiswa neEXCITEMENT yokuti mava mukadzi nomurume. Momboita nguva yokuti kana gore kana kupfuura muchinatsorhojana zvinogutsa uye chero pamadira. Kana pakasaita mwana panguva iyi munokwanisa kuirebesa asi inosvika pakupera.
Zvakatoonekwa kuti munodanana chose nokurhojana zvinofadza chose kusvika makore matatu nehafu apera. Nguva iyi ndipo panotanga kuti mese munofinhwa noumwe. Murume haachaoni zviri pamukadzi zvinofadza. Mukadziwo anoona murume somunhu anogara pamba chete kwete sezvaaita vachiri kunyengana. Anoti akaona murume wake haahwi mudumbu sezvakare. Akataura nomurume pafoni haahwi mudumbu sezvakare, Akahi ngatisangane kuSUPERMARKET haahwi mudumbu sezvakare.
Pamakore matatu nehafu apa ndipo panotangira zvokurhojana nengari yokungoti munogara mese uye makaroorana. Zvangova zvomutemo, chirango. Hapana ane hanya yakawanda nazvo. Unoona kuti panoitawo zuva mukadzi kana murume paanenge ane rino zizemo risingaiti, mombodzokorora zvamaisiita kare, asi mazuva akadai anoita mashoma pavhiki. Mamwe mazuva kungoita zvokutobvunza kuti nhai baba chimwana, ko makaneta here? Tongovata here savanhu vavirigwa pafira bhazi? wotohwa murume oti kana uchida kuiswa chiwana mukana wekumisa chombo ichi chinousimbe nhasi, asi kare aiti akangohwa hwi rako pafoni chaipo chombo twiii. Mukadziwo pamwe akasahi MaiChimwana swederai pano, anongodzimawo rambhi ototasamuka kutsvaka pakareruka kuvata. Wotoita manyawi okuudza murume kuti Ndimutse na sikisi nokuti ndiri kumukira kuSHIFT. Munoonana sehazvanzi nehazvanzi, munhu kupedzisira otozvibvunza kuti sei ndichishaiswa hope nomunhu anoridza magwiriri kudai. Asi kare waiti akangoita sowoswedera kuzasi kotoeredza nokuda kupinzwa chombo.
Kurhojana kwenyu kunenge kwava kwemazuva ese kungoti kisi imwe chete, ruoko gwemurume pamberi pamukadzi, wokwiza miniti imwe chete. Mukadzi obvunza unodei nhasi. Murume oti fongora, Mukadzi otomuka ofongora murume opinza. Kuzoti pa maminiti matatu vese votoridza mangwiriri. Mangwana ndizvozvo mangwana ndizvozvo. Unohwa umwe oti kasira ndiri kumukira kubasa
Kana mukasaongorora nyaya yenyu muchaona kuti pamunozosvika makore manomwe, umwe wenyu anenge afunga kuhura kana kuti atohura kare. Kusiri kuti kumba hakuna chiriko asi kuti mese hamuna hanya nazvo. EXCITEMENT yakatopera kare.
Hapana chinobuda ipapa. Vanhu ava vari kuzvigadzirira guva remuchato wavo. Murume uyu akasangana nomukadzi anomusimudzira chiuno anohwa EXCITEMENT iya yakare obva aravira zviri pamukadzi iyeyo. Mukadzi uyu akangotanga kudembadembera rimwevo koronyera raanoshanda naro kana kushamwaridzana naro, akakiswa zvine zvazvinoreva, anohwa mudumbu muya maasihwira murume wake vachiri kunyengana.
Chihure chizhinji chevanhu vaimbodanana chose chinotangira pazviitiko zvemumba panyaya yekurhojana iyi nokuti vanhu tinoda EXCITEMENT pakurhojana noumwe munhu. Iti ukafunga murume/mukadzi wako wohwa mudumbu. Kana ukafamba gwendo ukanoita vhiki mbri uriko paunodzoka kumba ukangoona murume wako chete, unongoda zvokumubata nokumukwevera kundorhojana unotohwa EXCITEMENT yekare iya. Ndizvo zvinodiwa mumba mune murume nomukadzi zvisinei kuti magara mese makore mangani.
Chinonakidza kuvata noumwe munhu handi kuti munhu iyeye ane chombo/chitubu chakasiyana nechewako, asi EXCITEMENT yokuita zvisiri zvekujairirana. Mumba usarega muchijairana kusvika panobhowa. Ukaona umwe wako asiri kuita hanya nazvo. Bvunza kuti zvaita sei nhasi. Kana ane nyaya terera nyaya yake. Mapedza muudze kuti unomuda muchitanga rhoji ine zvainoreva kwete kungoti kasira ndivate.
Zvino mumba munhu ane key yekufambisa muchato zvakanaka munhukadzi. Varume mungangodawo henyu kupindira nyaya asi chokwadi ndechokuti munhukadzi ndiye MANAGER wezvomumba. Mai vemba vakahwisisa kuti ndivo vane kii yomuchato musha unombofamba zvakanaka. Mukadzi akashaya njere hapana chinobuda.
Makore matatu nehafu zvinhu zvinokwanisa kusiyana. Tarisai nguva nemaitire enyu mumba mugare EXCITEMENT iripo.
Mukadzi hwisisa zvinodiwa nomurume wako woziva nguva yokuzviita. Kuudza murume kuti kasira ndoda kuvata kushaya RESPECT yomuchato wako. Pane zvakawanda zvaunofanira kuhwisisa.
1 Usasiya murume akasvinura iwe uchienda kundovata. Hazviiti. Kwezva murume uende naye kundovata. Kana aramba muudze akumutse paanouya. Kuti murume azive kuti mukadzi ari kuda chose kuiswa. Chero usingadi musi iwoyo, udza murume kuti wakamirira kuiswa kuti iye aite CONFIDENCE yokufunga kuti mukadzi wake akazvipira kwaari.
2 Hapana chikonzero chaungarambira murume kukurhoja kana iye atomboti ari kuda. Kana uchigwara iye anozviziva kuti unogwara. Haakunetsi. Kana uri kumwedzi iye anozviziva, asi akaita zemo wana maitire ekuti abve zemo. Maoko unawo. Varume vanofarira kubatwa chombo nokuchitambisa. Kuti munorhojana kangani mumba ndiwe unoziva. Ukaterera unohwa varume vakawandisa vachiti havaguti kumba nokuti mukadzi haadi. AAH imi zvaita sei. Murume haasi munhu anonetsa kugutsa. Isu tisu tinonetsa uye chokwadi ndechokuti varume vakawandisa havagutsi vakadzi vavo.
3 Usawana nguva yaunotaurira umwe munhu nyaya dzakadzama dzokumba kwako. Taurira murume wako ahwisise zvinokushaisa mufaro kana zviripo. Asi panyaya yokurhojana, ukadzidzisa murume kuti anonoke kukudiridzira wagona dambudziko rokutanga rinova guru pana ose. Kana musi waakunonokerawo chidetemba utaridze mufaro, womuyeuchidza nezvazvo vhiki yese. Woti Ndiite zvawakaita neSvondho nokuti handizvikangamwi.
5 Terera murume wako. Kana akataura zvisina musoro usafoya asi kuti bvunza mubvunzo unoratidza kuti uri kuda afunge mamwe mafungire. Murume anopiwa manyawi nomukadzi wake. Gara uchizvibvunza kuti chii chinogonekwa nemahure chandisingagoni ini mumba? Hure munhu ane zvese zvine mukadzi wemumba asi uchaona varume vachiita muraini kundopiwa siki naro vachitoribhadhara mari kutenga siki yacho. Rinombonaka zvakaita seiko zvatisinganaki isu vokumba? Gara uchibvunza murume kuti chii chausina kumbomuitirawo chaanofunga kuti ungaita. Kana akuudza chiswera uchifunga kuti unonozviita sei.
6 Hwisisa kuti muri vaviri chete vanhu vakuru mumba. Kana mukatsamwisana hapana umwe munhu wekutaurira. Kana murume wako angohwisisa kuti hazvina kukufadza zvaaita, chikasira kutanga kutaudzana naye. Kana uriwe wakanganisira murume kasirazve kuripa nechiuno pakunovata. Varume vakawanda kana akabvumidzwa kurhoja anoona sokuti nyaya yapera. Chipinda ipapo mangwana womuti shamwari takatukana madeko asi ndange ndirini ndiri pasipo. Ndodii kuti ufarewo nokukutadzira kwandakaita? Unoona munhu otonyemwerera. Chikasira nekisi ipapo wotomuudza zvorudo womuti akuite muranda wake vhiki yese, chero chaada unoita. Chokutanga ndechokuti mhosva dzako dzinowanda nokuti unogona kuripa, asi zhinji ndedzokukupomera kuti ukasire kuripa. Mhosva yawapiwa kana uchiziva kuti muripo wayo ndewekuBEDROOM, bvuma mhosva upedze vhiki uchiripa. Uchaonawo kuti murume paanokanganisa anokumbira regerero uye haafungi kuti uchamunyima zvinhu panyaya yacho. Kunyimana chigwere chemichato yakawanda asi zvinoitwa nemapenzi.
1 Varume ingotangai muchato nokutaurirana kusvika mukadzi ahwisisa zvaunoda. Rega aite MANAGER wezvomumba iwe basa rako ririko uye uguru rokuriritira mhuri nokuda mukadzi wako. Asi hwisisa kuti mukadzi munhuwo anoneta. Mabasa emumba akawanda. Batsira mukadzi wako mabasa. Zvikuru kana achishanda.
3 Kana mukadzi akati hendei tinovata, ndimutse, etc terera zvaari kutaura. Haasi kutaura zvokuvata hope. "Hendei tinovata" zvinoreva kuti ndiri kuda kuiswa, hendei tinoisana. "Ndimutse kana wouya" zvinoreva kuti usavata hope ndisina kuiswa chero ukawana ndavata. Hazvirevi kuti iye ane zemo, asi kuti ari kuti mava nenguva yakawanda asina kuhwa kuti mukadzi wako. Hwisisa nyaya iyi uitevedzere nomoyo wese.
Mukadzi wako akabva kumusha kwake kuvinga iwe. Akatora zita remhuri yako achisiya zita remhuri yake, kuti aita mai vemhuri yako. Chinhu chimwe chete chaange asingakwanisi kuwana kumhuri yake ndicho chatiri kutaura pano. Kumhuri yake hakuna akakodzera kuvata naye. Akasarudza iwe chete. Saka chirega kufoira pachinhu chimwe chete ichocho. Terera zvaanotaura. Chero akatsamwa sei usaita hanya nazvo. Chero iwe ukatsamwa sei usaita hanya nazvo. Kutsamwa ndekwefungwa. Kuvatana ndekwemuviri. Usavhenganisa nyaya mbiri.
4 Kana matanga zvekurhojana taridza rukudzo kumunhu akubvisira bhurugwa. Tora nguva uchirezva mukadzi wako regawo akurezve. Kana pane zvaunoda taura. Kana munhu ane zemo haarambi. Garomuudza kuti unoda zvokuti nezvokuti kana kungomuudza kuti inyanzvi pane izvi neizvo. Kuhi mukadzi handi chitubu chete, pane magaro, dumbu, mazamu, kumeso, muromo, zvidya, zvese zvinodawo kupiwa nguva nomurume wazvo kusvika chitubu chosiririka nokuda kupiwawo nguva. Kukiswa nomurume akakumisira chombo kunofadza nhaimi varume. Tipeiwo kisi refu dzinonaka.
5 Shamwaridzana nemukadzi wako Hapana THREAT ye AUTHORITY . Ndiye mukadzi uye anozviziva kuti mukadzi unotyei paari. Muviri wake ndiyo MAIN TOY yako yekutamba nayo. Fungwa dzake ndedzako dzokukutungamirira pamazano omumba kukuratidza kuti uri kuronga zvakanana. Tamba naye. Tamba naye sepwere muchigaroseka. Regawo atambe nechombo chako womuratidza matambire asinganonoki kuchimisa. Mukadzi wako anoita zvese zvaunoda kuitigwa kana achivimba newe kuti chokwadi chero zvodii hauna hanya nevamwe vakadzi.
6 Gara uchiziva kuti mukadzi anofanira kuva ne EXCITEMENT yokumukonzera kuda kugarorhojewa. Usajaira kungoti maitire awada nhasi ndiwo amangwana. Garofunga maitire akasiyanasiyana uye pekuitira pacho. MuBEDROOM ndemekuvata kwete kurhojana. KuRhojana kunonaka masikati, mangwanani, usiku, kwete kungomirira pakunovata. Hwisisa kugumbatirana nomukadzi wako nokumuzevezera zvinofadza muzheve dzake makagumbatirana kudaro. Shamwaridzana nechitubu chake pakuchitarisa, pakuchibatabata, pakuchidetemba, pakuchiitira nyaya, pakuchiongorora nokuchihwisisa, pakuchigera choya iye akati gumbo uko gumbo uko, pakuchipinza chombo nokuudza muridzi kuti zvinokunakira.
7 Hwisisa kuti mukadzi wako munhu ane njere anoda kugaroudzwa zvinhu zvine njere pazviri. Rongai mese zvinhu zvomusha. Pota uchimubvunza kuti PLAN yako pamusha uno iri papi akurondedzere uye azive kuti pane EXPECTATION yokuti agadzire musha. Anobva azivawo kuti mukadzi we LONG TERM. kwete OVERNIGHT.
Tese ngatihwisise kuti:
EXCITEMENT hagusi rudo. chinongoriwo chinhu chinoitisa vanhu kuti vaite zvinhu. Rudo gunobva mufungwa yomunhu kuti akaongorora akaona kuti shuwa upenyu hwake hwunonakiswa nokuda munhu uyu. Rudo iDECISION inoitwa nomunhu. Kana ukaona usisade munhu, ndiwe wafunga zvokusamuda kwete kuti iye pane zvaaita. Iwe ndiwe wafunga kusamuda. Ukangofunga kumuda unomuda futi zvaari izvozvo. Ngatisaudzana nhema panyaya yorudo. Ukasangana nomunhu mubhazi chaimo unohwa achikuudza kuti anokuda. Ari kuti Mufungwa mangu ndakakutarisa kudai ndiri kufunga kuti ndinokwanisa kusarudza kukuda. DECISION kwete EMOTION. Kunozoti nguva yapfuura waita INVESTMENT pamunhu ndipo paunoita EMOTION paari kuti akakanganisa kufunga akakuitira zvinangokupedzera nguva, womuudza kuti bodo dzoka hako tirambe tichidanana ndinokuda.
Ngatigarei mumba mune RUDO moitazve EXCITEMENT. Rudo gunoitisa murambe muchienderera mberi, EXCITEMENT ndeyokutsvaka zuva nezuva.
Usajaira kufunga kuti kurhojana itsika inoitwa mumba. Bodo. Kurhojana kunonaka kana pane EXCITEMENT yabva pamafungire enyu muchitamba, muchiitirana zvange zvisingafungigwi kuti muchaita nhasi.
Pindira murume/mikadzi achigeza wotanga kumubatabata achida kugeza.
Wongorora murumo wemurume/mukadzi achidya sadza chairo wotanga kufunga muromo wake achiita zvimwe nawo.
Tora chipimiso upime chombo chomurume wako uchiratidza kukatyamadzwa nacho.
Gera choya chomurume/mukadzi wako.
Sveta chombo/bhinzi ugotsanangura kuti zvinoita sei.
Bvunza mibvunzo pamusoro pepamberi peumwe wako
Verengai bhuku reBIOLOGY mese muchitaurirana nokubvunzana kusvika mese mahwisisa.
Nyoreranai pasi kuti umwe noumwe anoda kurhojana kupi uye nguvai
Potai muchinoitira musango kana mumunda, mugadheni, mugaraji, mukicheni, mubhavhu, mumota, muhotera, mutendhe, etc.
Kana pachivava kumbira umwe wako akukwenye uye kutarisa kuti panei.
Kuemerana kunokonzera kutamba mese
Funga zvamaichiita muchiri kunyengana. Chii chaikupa EXCITEMENT. Wana zvinokupa nhasi.
Garotumira murume/mukadzi wako tunhu tusina maturo pafoni uye kuporomisa kumuitira zvimwe zvinhu nokumubvunza zvaanoda.
"Ndiri kukurongera nhasi."
Kana mukaita mwana hwisisa kuti munomboita nguva attention iri pamwana motadza kupanana nguva yenyu imi. Mwana anodiwa chose asi anokanganisa mamirire akaita zvunhu mumba. Budiranai pachena kana maita mwana. Kumwisa mwana, kuwacha, kushaya hope nomwana, kuhi navarapi mirira 6 weeks, kupora zasi, kubuda mukaka pamazamu aisimwiwa nomurume, etc zvese zvinokonzera kuderedza zemo romukadzi kwekanguva. Murume anenge achiitei ipapo? Tauriranai mohwisisane.
Vasina kuroorana havaiti nguva yakadai. Mahure haana nguva iyi.
Chidzokai ma Chibwe. Nguva yarebesa
Mai chibwe makadii